Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai dies at 65 - Hawaii News Now - KGMB and KHNL
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File). FILE -- In this Nov. 30, 2016 file photo, Zimbabwe's main opposition leader Morgan Tsvangirai is photographed during an interview with the Associated Press in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai h...
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, file). FILE - In this Tuesday, Nov, 21, 2017 file photo, Morgan Tsvangirai, the main opposition leader in Zimbabwe addresses protestors outside parliament building in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai ...
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, file). FILE - In this Wednesday, March, 9, 2016 file photo, Morgan Tsvangirai, center, one of the main opposition leaders in Zimbabwe addresses a crowd taking part in a demonstration of activist Itai Dzamara in Harare. Z...
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, file). FILE - In this Saturday, Aug. 5, 2017 file photo, Zimbabwe's main opposition party leader Morgan Tsvangirai pauses as he addresses supporters at a rally in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai has ...